3 misoro yakanaka kune yako Linux desktop nharaunda | Linux Vakapindwa muropa
Pasina mubvunzo kugadzirisa nharaunda dzeLinux desktop ndeimwe yemadhirowa makuru iyo inokwevera kutarisisa kwevazhinji vashandisi veamwe masystem (Windows neMac).
Zvakanaka chimwe chekuwedzera icho isu tinoshandisa Linux ndeyekuti isu hatisi pasi penzvimbo imwe chete uye tinogona kuchinja nekutsiva nharaunda yedesktop yesystem yedu kakawanda sezvatinoda.
Kune izvi tinogona kuwedzera nhamba huru yemisoro yatinogona kuwana pamambure nazvo zvatinogona kuvandudza nazvo ruzivo rweizvi.
Ndokusaka nguva ino tichagovana nemi dzimwe dzakanakisa misoro inogona kubatsira vazhinji venyu.
1 Windows 10 Tarisa
2.1 Maitiro ekuisa iyo Sing theme
2.2 Imba Icon theme
4 Maitiro ekuisa Arc theme?
4.1 Maitiro ekuita sei
Windows 10 Tarisa
Isu tinogara tichiedza madingindira akawanda kwazvo, madingindira akanyatsojeka, madingindira akajeka, madingindira erima, Mac OS-senge madingindira.
Iyi tWindows 10 GTK ema (3.26+) inogadzirwa na b00merang ine icon pack yemifananidzo iyo inogona kupa yako Linux kuisirwa yakakwana makeover kunge dhayidhi dhizaini yeWindows 10. Inouya neyakajeka uye nerima vhezheni yetimu.
Nyaya iyi inotsigira rondedzero inotevera yenzvimbo dzedesktop:
Kuti uwane iyi tema, unofanirwa dhawunirodha pasuru Windows 10 Musoro kuburikidza kubva pane inotevera chinongedzo uye zvakare kupedzisa chinoonekwa chinofanira kukopa iyo Windows 10 icon pack kubva pane inotevera chinongedzo.
Mushure mekurodha pasi, bvisa madingindira nezvidhori. Dzorerazve mafaira akaburitswa se "Windows-10-theme", "Windows-10-theme-rima", "windows-10-icons".
Y teedzera iro rese theme theme ku:
Kopa iyo yose dhairekitori remifananidzo ku:
Chekupedzisira, ivo vanofanirwa kuisa shanduko neyakafanira chishandiso kune yavo desktop desktop.
Rwiyo Rwiyo Icho chinyorwa cheGTK chinoenderana neruvara rwegirini iyo inowanikwa yeGTK 2 uye GTK 3 yakavakirwa desktop desktop. Unogona kuiisa pane yazvino vhezheni yeGNOME Shell pamwe neese GTK 2 uye 3 kugoverwa kunoenderana.
Iyi tema inouya ne11 dzakasiyana ayo akaiswa muchikamu chepasi, chakareruka, chakasviba, chakatenderedza, chakaenzana uye chakakwenenzvera kune yega yega.
etsii dingindira, musiyano unoshamisa uchienzaniswa nemamwe madingindira ndiyo yakakomberedza makona eiyo windows windows. Zvakare inotonhorera kumashure nzira yefairajaja.
Iyo yeCanta theme inoshanda zvakanyanya neayo pachezvayo seti padhuze neNumix icon set
Maitiro ekuisa iyo Sing theme
Kuti utore rwiyo urwu Imba Ivo vanofanirwa kuzviita vachishandisa inotevera chinongedzo uye kubvisa pasuru. Dhawunirodha Canta theme
Paunenge waburitswa, vhura iyo terminal uye unomhanya:
Imba Icon theme
Kuisa iyo Canta icon theme, enda ku / src / icons folda mune dhairekitori rakambotorwa uye unomhanya naro kubva kumagumo:
Dhawunirodha iyo Numix icon seti, ubvise uye uakope kune iyo .icons dhairekitori. Dhawunirodha Numix Icons.
Arc theme ndeye yakanaka yakanaka flat theme ine yakajeka zvinhu zveGTK2, GTK3 uye GNOME shell inotsigira nharaunda dzakasiyana senge GNOME, xfce, MATE.
Musoro we Arc inouya nemitatu mitatu inotonhorera: Arc, Arc-Yakasviba uye Arc-Rima. Mumwe nemumwe wavo ane chitarisiko uye anogona kupa desktop yako chitarisiko chitsva.
Maitiro ekuisa Arc theme?
Arc Inowanikwa mune yepamutemo repositi yeDebian, Ubuntu, xubuntu, Lubuntu uye zvimwe zvigadzirwa.
Kuti uite izvi, chingomhanya unotevera kuraira mune terminal yekuisa iyo Arc theme paDebian, Ubuntu (18.04, 18.10) uye zvigadzirwa:
Para Arch Linux vashandisi uye zvigadzirwa zvinomisikidzwa kubva kuAUR ne:
Kana iri Fedora uye zvigadzirwa zvacho zvinomisikidza nemirairo inotevera:
Pakupedzisira iwe unogona kutarisa chinongedzo chinotevera uko icho chinopa nzira dzekumisikidza kune kumwe kugovera.
Maitiro ekuita sei
Kana iwe urikumhanya Ubuntu, vhura iyo Settings turu. Pane iyo yekuonekwa tebhu, chinja theme mune maapp.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » 3 misoro yakanaka kune yako Linux desktop nharaunda
Juan Martin Diaz akadaro
Ndatenda kwazvo nezve posvo David, ndainyanya kufarira Arc theme.
Ini ndakakwanisa kuiisa pasina matambudziko, chinhu chega chisina kuuya ne icon pack yakaratidzwa mumufananidzo.
Unogona here kundiudza kana iwe waisa iyo icon pack zvakasiyana uye mune iro zita rayo uye maitiro ekuiisa kana chero chirevo kune kurodha pasi.
Pindura Juan Martín Díaz
Natron: yakavhurika sosi yevhidhiyo compositing application